Abadlali bebhola ekhatywayo baseScotland
Abadlali bebhola baseAlgeria
Abadlali bebhola ekhatywayo baseMelika
Abadlali beBhola ekhatywayo baseOceania
Abadlali bebhola baseTurkey
UKONGEZWA KWEBHOLA KWIBHOLA
Abadlali bebhola eklasikhi
bonkeAbadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesiAbadlali bebhola ekhatywayo baseScotlandAbadlali bebhola baseWales
I-Emile Smith Rowe Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Rhys Williams yobuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
UJohn McGinn Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
IJarrod Bowen Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
URafael Leao Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Ibali le-Angelino yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Alassane Plea Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Houssem Aouar Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
bonkeAbadlali bebhola baseAlgeriaAbadlali bebhola ekhatywayo baseCamerooniaAbadlala ibhola yeGhanianAbadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory CoastAbadlali bebhola baseNigeriaAbadlali bebhola baseSenegal
I-Angelo Ogbonna Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Folarin Balogun Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Folarin
I-Youssoufa Moukoko Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Arthur Masuaku Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
bonkeAbadlali bebhola baseArgentinaAbadlali bebhola baseBrazilAbadlali bebhola ekhatywayo baseCanadaAbadlali beBhola ekhatywayo baseColumbianAbadlali bebhola ekhatywayo baseMelikaAbadlali bebhola ekhatywayo base-Uruguay
URonald Araujo Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Raphinha Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
AMABALI EBHOLA AQHELEKILEYO AMERICAN
Iinyani zeCaicedo Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Leon Bailey Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
bonkeAbadlali beBhola ekhatywayo baseOceaniaAbadlali bebhola baseTurkey
I-Hakan Calhanoglu yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Cengiz Phantsi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
AMABALI EEBHOLA ASI-ASIA-OCEANIAN
bonkeAbadlali bebhola eklasikhiAbadlali bebhola ekhatywayoAbaphathi bebhola
URalph Hasenhuttl Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Hansi-Dieter Flick yobuntwana Ibali leNqaku le-Untold Biography
Iinqaku leMarcelo Bielsa yobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yoBuntwana
Ikhaya UKONGEZWA KWEBHOLA KWIBHOLA Abaphathi bebhola Ibali leChris Wilder yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Chris
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo leMidlalo yeBhola yeGenius yesidlaliso "Umphathi weSikolo saBadala". Ibali lethu leChris Wilder yobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yeChrisold ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kukaChris Wilder. IiCredits zemifanekiso: I-LastSticker kunye ne-Twitter.
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala / imvelaphi yosapho, imfundo / ukwakha umsebenzi, ubomi bekamva lomsebenzi, indlela eya kudumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubomi bobuhlobo, ubomi bomntu, iinyani zosapho, indlela yokuphila kunye nezinye iinyani ezingaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungumphathi onento ebizwa ngokuba 'Dinosaur'indlela yokuphatha ibhola, owenza imimangaliso ngokwenza iqela lakhe le-Sheffield (Ixabisa ngaphantsi kwe- $ 1m) Uqale kakuhle kwisizini yeligi ye-2019/2020. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abajonga inguqulelo yethu yeChris Wilder's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokuqhubeka, masiqale.
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Imvelaphi yoSapho kunye noBomi baKudala
UChristopher John Wilder wazalwa ngomhla we-23rd ka-Septemba ka-1967 e-Stocksbridge, idolophu encinci kunye neparishi yoluntu ekwisiXeko saseSheffield, eNgilane. Nangona wazalelwa eSheffield, umphathi webhola ekhatywayo waseBritane omhlophe ubuhlanga unosapho oluvela kwisiXeko saseLiverpool, oko kuthetha ukuba 'Is Scouser'.
UWilder wakhula kunye nabazali bakhe, abantakwabo kwaye okona kubaluleke kakhulu, oomalume bakhe ababenempembelelo enkulu ekukhuleni kwakhe. Uvela kwikhaya losapho olukumgangatho ophakathi oluqhutywa ngutata wakhe owafumana indawo yokuhlala kwindawo yaseLiverpool. Njengomntwana omncinci, oomalume bakaWilder babenempembelelo enkulu kuye ekuthandeni umdlalo. Iseti yoomalume bakhe ayimfundisanga kuphela indlela yokudlala ibhola, kodwa bamsa e-Anfield ukuya kubukela imidlalo yeLiverpool. Ngamazwi akhe;
“Sasidla ngokuya kwiKrisimesi kunye neholide yesikolo engaqhelekanga. Kulapho ndaye ndaye ndaya eAnfield nababalume bam ababehlala kwilali edumileyo, empuma yeLiverpool. Ndingababukela kubandakanya notata wam abadlala ibhola ”
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kwiminyaka yamashumi asixhenxe, iLiverpool yayinokuphumelela okukhulu, iphumelela yonke into- indebe yaseYurophu, i-UEFA Champions League, iNdebe yeHlabathi, yeNdebe yeYurophu / ye-UEFA Super Cup njl. uChris Wilder wayeku-Anfield ukuyotya amanye ala maxesha notata wakhe kunye noalume, uphuhliso olambona engafuni enye into ngaphandle kokuba ngumdlali webhola.
Xa ndandisesikolweni, uWilder wayeyonwabela yonke imidlalo, ngakumbi ikhilikithi. Ngaphandle kokuba ngumjikelezi-langa wonke, ibhola yomnyazi isagxilwe ekugxilwe kuyo. Ukuze uqhubeke amaphupha akhe, UChris Wilder washiya iLiverpool kwindawo yakhe yokuzalwa waya eSheffield ekhangela amathuba ebhola ekhatywayo. Uye waqeshwa njengebhola kwi-stocksbridge Park Steels FC ekwisithili seShersbridge ukuya eSheffield.
Emva kwexesha elithile, uWilder wafumana isilingo esiphumelele kunye neSouthampton njengomdlali webhola kunye nomdlali webhola. Njengomfundi othobekileyo, uthathe inxaxheba ekucoceni amabhuthi ebhola ekhatywayo weSouthampton legend- UDavid Armstrong. Ngaphandle kokunikela ngako konke okusemandleni akhe, uWilder olihlwempu akakwazanga ukuqhubela phambili kwinqanaba leklabhu yolutsha ukuya kwibhola ephezulu. Ngokudabukisayo, wakhululwa ngenxa yokusebenza kakubi ngaphandle kokuyenza kwiqela lokuqala laseSouthampton.
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Umsebenzi weBhola kwiSishwankathelo
Nawuphi na umdlali wolutsha ophumeleleyo ukwaliwa kwezemfundo Uya kuyazi kakuhle kuphela intlungu enzulu yeemvakalelo kunye nokonakalisa iziphumo zengqondo ezinokubakho. Emva kokusilela ukwenza ibakala njengomdlali wezemfundo waseSouthampton, u-Wilder olihlwempu wabuyela eSheffield, idolophu yakhe yokuzalwa. Ngombulelo, uSheffield United wamamkela njengomkhuseli.
Ngaphandle kokuba ngumdlali ophakathi, uSheffield wanceda uWilder ekwenzeni umsebenzi wakhe ophezulu. Owayesakuba ngumfana webhola akazange azibonakalise kwiqela lokuqala leklabhu ngo-Agasti 1986. Ngexesha lomsebenzi wakhe noSheffield, uWilder wazithoba ngokuboleka imali kunye neeklabhu ezili-11 ngaphambi kokujoyina iHalfax Town kwi1999, iklabhu apho waxhonywa khona ekugqibeleni izihlangu zakhe. UWilder (ochazwe ngezantsi) uthathe umhlala-phantsi ebholeni eneminyaka eyi-34.
UChris Wilder uthathe umhlala phantsi kwibhola ekhatywayo eneminyaka engama-34. Ityala lemifanekiso: BT
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Indlela eya kwiNdaba ibali
UChris Wilder emva kokuthatha umhlala phantsi waqala ngokuphathwa kwebhola ngeenkolelo zokuba uza kwenza ngcono nangaphandle komdlali webhola ophakathi. Waqala umsebenzi wakhe wokuqeqesha kunye neAlfreton Town ngonyaka we-2001. Ulawulo lwebhola njengoko wayelindele luqale kwinqanaba elifanelekileyo. Ubusazi?… Kwiiveki nje ze-27 emva kokuphatha u-Alfreton, le ndoda ingumNgesi yaphumelela iindebe ezine.
Ukuthatha isigaba esilandelayo kumsebenzi wakhe wokuphatha, uWilder waya kulawula iHalifax kwimidlalo engaphezulu kwe-300 kude kwaba yilapho iklabhu iye yanqunyanyiswa kwi-30 ngoJuni 2008. Ukupheliswa kwakhokelela ekubeni afudukele e-Oxford kwaye kamva, kwiLigi yesibini yeqela, iNorthampton, apho wabakhokelela kwi ILibini iLungu isihloko esinamanqaku e-99.
Ubusazi?… UChris Wilder ngelixa e-Northampton ebengahlawulelwanga iinyanga ezintathu, uphuhliso olukhokelela kumava abuhlungu okuba ikhadi lakhe liye lahla ngokungaginyisi mathe kwimarkhopark enkulu. Simkhathazile !!!
UChris Wilder wahlawulwa ikhadi lakhe xa wayenetyala lomvuzo weenyanga ezi-3. Ityala lemifanekiso: Intetho yesikhova kunye neentlawulo ze-agile
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Ukunyuka Kwigama
Ubomi bukaChris Wilder kwiliso lezaqhwithi zemali buhlangulwe yiNkosana u-Saudi Arabia u-Abdullah, umnini weSheffield ommemileyo ukuba athathe ulawulo lweqela. Kwi-12 ngoMeyi 2016, uWilder wajoyina iklabhu yakhe yobuntwana Sheffield United.
Ngoncedo lwemali encinci, uWilder wenza izinto ezininzi azifumana ngokudluliselwa simahla. Wenza umsebenzi wakhe wokuqala ukuba abe; “Ukwenza abadlali bazive besekhaya”. Ngelinge lokufezekisa oku, umphathi ongenantsingiselo uyikhuphile imibhalo ebukhali “Wamkelekile emsebenzini”Kumhlaba weklabhu yoqeqesho. Kuye, zazikho izivakalisi ezingcono ezikhuthazayo kwaye abadlali babenzelwe ukuba bazive besekhaya.
UChris Wilder ekungeneni kwakhe eSheffield wakrazula izilogeni ezikhuthazayo ezenza umdlalo woqeqesho. Ityala lemifanekiso: I-SuFc kunye ne-Twitter
Ngaphandle kokuqala kakubi kwesizini yokuqala, uWilder wakhokela iklabhu ukuba abe liLigi yeChannel One yokufumana amanqaku e-100 kwinkqubo (irekhodi leklabhu). Impumelelo yakhe yaqhubeka emva kokufumana i-Championship. Kwintshatsheli, uWilder wakhokelela kwicala lakhe uSheffield United ukuya kwinqanaba lokuphumelela kwisibini seminyaka emithathu kwiklabhu.
Ukuqonda impumelelo yakhe, wanikwa umphathi we-LMA we2018 / 2019 isizini. Ukoyiswa kweWilder Pep Guardiola Ukufumana ibhaso ngelixa umphathi weManchester City egqibezela ukufumana imveliso yasekhaya.
UChris Wilder ubambelele kumphathi we-LMA yoNyaka- imbasa ka-2018-19. Ityala lemifanekiso: DailyMail
Emva kokuzisa iklabhu yakhe yedolophu kwiligi yeNkulumbuso, uWilder waqala ukwakha iqela lakhe UJohn LundstramNgelinye ixesha u-Everton wala kunye nomdlali webhola ekhatywayo kwisixeko sakhe, eLiverpool. Ukunika abanye abadlali inkululeko yokusebenzela babona wonke umntu elungele iijigsaw zeBlades. IWilder Sheffield United ngexesha lokubhala ibonakalisile ukuba indawo yebhola ekhatywayo iphosakele emva kokuxhaswa ngabanye abalandeli njenge isisiseko sePremier League.
Njengakwelo xesha lokubhala, umphathi waseNgilani ovela eLiverpool ukhutshelwa njengomnye wabadlali abaphambili bePremier League Pep Guardiola-Konke kubulelwe ukuqala okumangalisayo kweBlades ukuya kwixesha le-2019/2020. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Ulwalamano lobomi
UChris Wilder yindoda etshatileyo. Kuqala wayetshatile nowayesakuba ngumfazi wakhe ogama linguRachel Wilder, bobabini babeneentombi ezimbini ezintle; UMartha Wilder kunye no-Evie Wilder. Ukuzisa abantwana ngelixa umyeni wakhe eqhubeka neshishini lakhe lokuqeqesha, uRachel Wilder walawula ivenkile yokugqoka enezikhephe eManchester nase Sheffield.
Ngokweengxelo, kwavezwa ukuba owayesakuba ngumfazi kaChris Wilder (uRachel) akayithandi ibhola, ngamanye amaxesha ukhathala yiyo ijongwa iiyure ezininzi kwikhaya losapho. Nangona kunjalo, ujonga kuphela xa iqela lomyeni wakhe liphumelela. Phakathi kweentombi zikaChris Wilder, kuphela UMarta othanda ezemidlalo. U-Evie Wilder ukwimo yefashoni.
Emva kweminyaka emininzi yomtshato wabazali babo, bobabini uMartha noEvie baqala ukungqina ubudlelwane obunciphayo phakathi kukamama notata wabo. Izinto zaqala ukonakala kwaye kwaba muncu kangangokuba a 'uqhawulo-mtshato' yabonwa njengeyona ndlela ibalaseleyo yesibini esitshatileyo.
UChris Wilder waqhubela phambili emva koqhawulo mtshato. Emva kwexesha elithile, wadibana nenenekazi elibizwa ngokuba nguFrancesca elathi wachaza intlanganiso yabo 'ukuthanda umntu ukuqala ukumbona'. Bobabini uChris noFrancesca batshata ngosuku lomhla wokudluliselwa kwe2017 (31st kaJanuwari 2017). Olunjani usuku umphathi webhola ukuba atshatele !!
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Ubomi bomntu
Ukwazi ngobomi bukaChris Wilder kuya kukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo wobuntu bakhe kude nemisebenzi yakhe kwibala lebhola.
Ukuqala phantsi, uWilder yindoda ethembekileyo ebambisa ngobungcali kunye nendlela eyonwabisayo yokugcina abantu bephantsi kwenkathalo yakhe. Ukholelwa kakhulu kwinkululeko kwaye akanakuyithatha loo nto ukuba lula kwakhe kuthathelwa ingqalelo. Umzekelo, ukuba wenze into emonwabisayo, angakuvuyela ukukuxelela ukuba wonwabile. Ukuba wenza into engamonwabisiyo, uya kukwazisa kwangoko, ngamanye amaxesha eze kuwe iitoni zezitena. Ethetha ngobuntu bakhe malunga nokungabunyamezeli ubuvila, wakhe wathi 'Iiweyitala zenzelwe kuphela iivenkile zokutya hayi abadlali abangaphumeleliyo ukuqonda iitalente zabo '.
Uthando lwakhe ngeBhiya kunye newayini: Ukuxoxa ngobomi bakhe ngokwembono yentlalontle, uChris Wilder uchazwa ngabaninzi njengomntu owayehlala ekuhlaleni (ngakumbi) nabahlobo bakudala abasuka kwindawo yentselo apho abonwa khona kakhulu ebeka ibhiya yakhe ayithandayo.
Ukwazi uChris Wilder uBomi baBantu kude neBhola. IiCredits Zemifanekiso: izsearch, EveningStandards kunye neBT
Ubusazi?… Isibini esineebhiya kunye newayini kunye nabasebenzi bakhe bokuqeqesha kunye nabadlali abadala bahlala behla kakuhle emva kweyona mpazamo inkulu.
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Ubomi Bentsapho
Usapho lukaChris Wilder ngexesha lokubhalwa luhlala e-Ecclesall Road, indlela eseSheffield, eSouth Yorkshire, eNgilane. Ngexesha lokubhalwa, uqinisekisile ukuba onke amalungu osapho enza iinzame eziqinisekileyo zokungafuni ukwamkelwa luluntu.
Ngenxa yeqhina losapho, yonke intsapho yakhe eyandisiweyo iyonwabela xa ibhola iyithatha iye eMerseyside ukuze idlale ngokuchasene neLiverpool okanye i-Everton. Kungenxa yokuba umphathi weSheffield United wasebenzisa loo maxesha ukunxibelelana nosapho lwakhe eLiverpool. Naxa iqela lakhe lidlala i-everton okanye neLiverpool, uWilder uzifumana ethenga amatikiti omdlalo kwabanye babachasi bakhe awabachazayo njengoSapho. Yiyo loo nto, ukudlala ngokuchasene necala losapho lwakhe kungobom ngokunzulu kuba utata wakhe uvela eLiverpool kwaye uninzi lwamalungu osapho lwakhe lube ngabalandeli beLiverpool okanye i-Everton.
Kwelinye icala, abalandeli beSheffield basabanga ukuba iWilder yeyabo kuba ukhulele kwisixeko sabo. Ubusazi?… I-Wilder ihlala ihluthwa yimingxunya ye 'Ungomnye wethu'Kwindlela yakhe ethandekayo uBramall. Oku kungenxa yokuba abalandeli be-Sheffield bayamthanda kwaye bakholelwa ukuba uyintsapho.
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- yokuPhila
UChris Wilder uphila ubomi bokuthobeka nangona efumana umvuzo ofanelekileyo njengomphathi. Endaweni yokusebenzisa iimoto ezinamavili ezinokuthengwa ngumvuzo wakhe, angathanda ukuhambahamba ngeSheffield ngothutho lukawonkewonke olukhetha iibhasi.
Ngokweengxelo, uWilder ngamanye amaxesha usebenzisa isitiya sebhasi i-Ecclesall Road ngasekhaya, uphawu olubonisa ubume bakhe emhlabeni. Uthandabuza, ngaphandle kwamathandabuzo, uyicekeceke kubomi obuxabisekileyo.
IChris Wilder Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Chris- Inyaniso engekho
Wayefudula enguMnumzana Sir Alex Ferguson: Ubusazi?… UChris Wilder ngexesha leentsuku zakhe zokuqala zokulawula wayengumfundi kwilungu elidlulileyo lomphathi waseManchester United Sir Sir Ferguson.
UChris Wilder noAlex Ferguson- Utitshala wakhe. Ityala lemifanekiso: SUFC
Ngexesha lakhe e-Alfreton Town nase-Oxford, uWilder wayeya kaninzi ukuya eManchester ukuya kubona umphathi weLeanary yezifundo zokucebisa. Ukuthetha ngamava, wakhe wathetha ngamazwi akhe;
“Uthathe ixesha lokundinceda apha endleleni. Wayeqhele ukukwenza oku kubaphathi abancinci baseBritane, hayi mna kuphela. Izinto ezinje zandomeleza kakhulu.
Ukhe watsalela umnxeba kubusuku obandulela umdlalo wam wokugqibela kumdlalo wokugqibela neOxford [nxamnye neYork ngo-2010] wadlulisa iingcebiso ezimbalwa ezandinceda ndaphumelela.
Inkolo: Chris I-Wilder nje njengentsapho ezininzi zeLiverpool kukholelwa ukuba zivela kwimvelaphi yentsapho yamaKristu. Nangona kunjalo, akukho zimpawu ezincinci okanye akukho nto ibonisa ukuba unamathele kunqulo.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda iChris yethu yeChilder yoBuntwana bamaNqaku aMncinci kunye ne-Untold Biography Facts. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali ilungile, nceda wabelane nathi ngokuphawula apha ngezantsi. Siza kuhlala sizixabisa kwaye sizihlonipha izimvo zakho.
I-Sheffield United Idayari yeBhola ekhatywayo
I-Che Adams Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Conor Coady yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Rhian Brewster Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Ollie Watkins Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
UHarry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
BHALISA KWI-LIFEBOGGER FOOTBALL STORIES!
Ndiyavuma umgaqo-nkqubo wabucala kunye nemigaqo. (ikhonkco)
Umhla oguqulweyo: Oktobha 18, 2020
Umhla oguqulweyo: Oktobha 8, 2020
I-Wesley Fofana Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Umhla oguqulweyo: Oktobha 30, 2020
Umhla oLungisiweyo: nge-31 kaDisemba ngo-2020
IArturo Vidal Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
INKCAZO !! I-LifeBogger ayibangi ubunini bayo nayiphi na imifanekiso ethunyelwe kule webhusayithi. Kwakhona, asiyamkeli imifanekiso okanye iividiyo ngokwethu. Ababhali bethu banxibelelana nomnini osemthethweni. Okokugqibela, i-LifeBogger uyiqwalasele ngononophelo kwaye uyiqwalasele yonke imixholo yayo. Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba ulwazi oluthile lunokuphelelwa lixesha okanye lungaphelelanga.
Qhagamshelana nathi: admin@lifebogger.com
© Ilungelo lokushicilela © 2016-2020
I-Frank Lampard Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Oktobha 22, 2020
I-Steven Gerrard Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oguquliweyo: NgoNovemba 8, 2020
Ibali likaDavid Beckham Ibali labantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oguquliweyo: NgoNovemba 12, 2020
Umhla oguqulweyo: Oktobha 25, 2020